Homopiperazine vovoka (505-66-8) hplc≥98% | AASraw R & D Reagents
/ Products / R & D Reagents / Homopiperazine poids
SKU: 505-66-8. Sokajy: R & D Reagents
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra azo avy amin'ny gram amin'ny lamosin'ny homopiperazine poids (505-66-8), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Homopiperazine poids dia ampiasaina hanomanana 1,4-bis- (2-thiazolyl) -1,4-diazacycloheptane amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny 2-bromo-thiazole. Izy io dia miara-miasa amin'ny repaglinid sy fasidil hydrochloride. Azo ampiasaina amin'ny famolavolana ireo mpanohitra mahery fihetsika H3, izay ampiasaina amin'ny fitsaboana ny toe-pahasalamana amin'ny tsy fahasalamana. Ankoatra izany, dia ampiasaina amin'ny fitaovana maoderina, kosmetika, fanasitranana ary fitaovana mahery vaika. Izy io dia toy ny fihenanam-bidy amin'ny vy. Ao amin'ny pharmaceutique dia ampiasaina ho antipyretic ary fampihenana siramamy ny ra, fitsaboana, tony, antipsychotic ary manohitra ny atidoha.
Homopiperazine video vovo
Homopiperazine poids ireo karazana fototra
Name: Homopiperazine poids
Formula Molecular: C5H12N2
Meny fitetezana 102.177
Storage Temp: Mpanafaka, ao ambanin'ny atmôsfera
Color: Fotsy amin'ny volo fotsy manganohano
Homopiperazine vovoka toy ny fitsaboana ho an'ny fahasimban'ny neurodegenerative
(1) Ho an'ny granules ho an'ny vahaolana amin'ny ratra dosage:
• Ny olon-dehibe sy zatovo-2 gram intelo isanandro isan'andro. Mety mila averimberina ny fitsaboana mandritra ny tapa-bolana.
• Ny zaza-Dose dia mifototra amin'ny taonany sy / na lanjany. Mety mila averimberina ny fitsaboana mandritra ny tapa-bolana.
• Hatramin'ny taonan'ny 2: Tsy maintsy voamarin'ny dokotera ny dos.
• 2 hatramin'ny 8 taona: grama 2 indray mandeha isan'andro isan'andro.
• 8 hatramin'ny taona 14: roan'ny 2 isan'andro in-droa isan'andro.
(2) Fanolorana fanafody fanolanana:
• Ny olon-dehibe sy zatovo-1.8 gram rehetra isaky ny adiny efatra ho an'ny dosie telo amin'ny iray andro. Mety mila averimberina ny fitsaboana mandritra ny tapa-bolana.
• Miorina amin'ny taona ny zaza-Dose. Mety mila averimberina ny fitsaboana mandritra ny tapa-bolana.
• Hatramin'ny taona 2: 600 milligrams (mg) isaky ny adiny efatra ho an'ny dosie telo amin'ny iray andro.
• 2 hatramin'ny 8 taona: grama 1.2 isaky ny enina ora ho an'ny dosie roa amin'ny iray andro.
• 8 hatramin'ny 14 taona: grama 1.2 isaky ny adiny efatra ho an'ny dosie telo amin'ny iray andro.
(3) Ho an'ny takelaka fanafarana tablette:
Ho an'ny kofehy mahazatra:
• Lehibe sy zatovo-Gramon'ny 3.5 (hexahydrate piperazine) isan'andro isan'andro mandritra ny roa andro. Mety mila averimberina indray ny fitsaboana mandritra ny herinandro.
• Ny zaza-Dose dia mifototra amin'ny lanjan'ny vatana ary tsy maintsy tian'ny dokotera. Na izany aza, ny dosie mahazatra dia 75 mg (piperazine hexahydrate) isaky ny kilao (34 mg isan-jato) ny lanjan'ny vatana isan'andro isan'andro roa andro andalana. Mety mila averimberina indray ny fitsaboana mandritra ny herinandro.
Ho an'ny pinworms:
• Ny olon-dehibe sy ny ankizy-Ny dos dia mifototra amin'ny lanjan'ny vatana ary tsy maintsy tian'ny dokotera. Na izany aza, ny dosage mahazatra dia 65 mg (piperazine hexahydrate) isaky ny kilao (29.5 mg isan-jato) amin'ny lanjan'ny vatan'ny olona isan'andro mandritra ny fito andro misesy. Mety mila averimberina indray ny fitsaboana mandritra ny herinandro.
Fampitandremana amin'ny poety homopiperazine
Aza mamono puppy na kitten na enim-bolana. Tsy misy kankana marary marary, alika, saka, na kitten. Miangavy mpitsabo iray any amin'ny toeram-pitsaboana, fitsaboana ary fifehezana ny parasitism. Tsy atolotry ny alika eo ambany 5lbs. na saka eo ambany 2lbs. ny lanjan'ny vatana. Tsy voatery ho an'ny vehivavy bevohoka na misotro vohoka. Ny biby fiompy mandritra ny taona 1 dia tokony hanandrana fitsapam-pahaizana momba ny fitsaboana vao haingana vao haingana alohan'ny hamoahana azy.
Ny poety homopiperazine dia ampiasaina hanomanana 1,4-bis- (2-thiazolyl) -1,4-diazacycloheptane amin'ny fihetsika amin'ny 2-bromo-thiazole. Izy io dia miara-miasa amin'ny repaglinid sy fasidil hydrochloride. Azo ampiasaina amin'ny famolavolana ireo mpanohitra mahery fihetsika H3, izay ampiasaina amin'ny fitsaboana ny toe-pahasalamana amin'ny tsy fahasalamana. Ankoatra izany, dia ampiasaina amin'ny fitaovana maoderina, kosmetika, fanasitranana ary fitaovana mahery vaika. Izy io dia toy ny fihenanam-bidy amin'ny vy. Ao amin'ny pharmaceutique dia ampiasaina ho antipyretic ary fampihenana siramamy ny ra, fitsaboana, tony, antipsychotic ary manohitra ny atidoha.
Ny poety homopiperazine dia azo ampiasaina amin'ny fivarotam-panafody organika sy pharmaceutique, ohatra, izay ampiharina amin'ny synthesis ny hydrochloride fasudil.
Ny vovon-tsolika homopiperazine dia toy ny fihenanam-bidy amin'ny vy. Izy io koa dia nampiasaina tamin'ny fanomanana ireo mpanohitra antibiotika mahery fo H3 mba hampiasaina amin'ny fitsaboana amin'ny toe-pahasalamana mandripaka ny aretina Alzheimer.
Homopiperazine vovoka Marketing
Ahoana no hividianana vovoka homopiperazine avy any AASraw
Ny tatitra momba ny fanadihadiana mahazatra indrindra momba ny Homopiperazine